ITokyo iphakamisa imikhawulo yokudlela njengoba amacala amasha e-COVID-19 ehla
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Japan Izindaba Ezintsha » ITokyo iphakamisa imikhawulo yokudlela njengoba amacala amasha e-COVID-19 ehla
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Culinary • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Japan Izindaba Ezintsha • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Shopping • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Amawayini & Imimoya
ITokyo iphakamisa imikhawulo yokudlela njengoba amacala amasha e-COVID-19 ehla.
E-Tokyo, cishe izindawo zokudlela ezingama-102,000 eziqinisekisiwe njengezinezinyathelo ezidingekayo zokulwa ne-COVID-19 ngeke zisaba ngaphansi kwesicelo sokuyeka ukuphuza utshwala ngo-8: 00 pm isikhathi sendawo.
Inani lamacala amasha aqinisekisiwe we-coronavirus lehle kakhulu kulo lonke elaseJapane.
Inhloko-dolobha yaseTokyo iqinisekise amacala amasha ayi-19 kuphela okutheleleka nge-COVID-19 ngeSonto.
Imikhawulo yendawo yokudlela yasuswa eTokyo futhi yazungeza izifunda okokuqala ngqa ezinyangeni eziyi-11.
Njengoba amacala e-COVID-19 aqinisekisiwe nsuku zonke ehle kakhulu kulo lonke elaseJapan ngeSonto, iTokyo, iKanagawa, iSaitama, iChiba kanye ne-Osaka iphakamise imikhawulo ye-COVID-19 ezindaweni zokudlela namuhla.
Imikhawulo ekunikezelweni kotshwala kanye namahora okusebenza ezindaweni zokudlela enhlokodolobha nase-Osaka yasuswa okokuqala ezinyangeni eziyi-11, kulandela ukwehla okuqhubekayo kwezifo kulo lonke elaseJapane.
Amacala aqinisekiswe nsuku zonke e-COVID-19 ehle afinyelela ku-236 ezweni lonke izolo, uma kuqhathaniswa nangaphezu kuka-25,000 abikwa maphakathi no-Agasti, ngesikhathi segagasi lesihlanu lokutheleleka.
ITokyo iqinisekise ukutheleleka kwansuku zonke nge-19 ngeSonto, okuyisibalo esincane kunazo zonke kusukela ngoJuni 17 nyakenye.
E-Tokyo, cishe i-102,000 izindawo zokudlela eziqinisekiswe ukuthi zinezinyathelo ezidingekayo zokulwa ne-COVID-19 ngeke zisaba ngaphansi kwesicelo sokuyeka ukuphuza utshwala ngo-8:00 ebusuku ngesikhathi sendawo. Kodwa-ke, cishe izikhungo zokudlela ezingaqinisekisiwe ezingaba ngu-18,000 zizodinga ukuqhubeka nokulandela imikhawulo emidala futhi kufanele ziyeke ukusebenza ngo-9:00 ebusuku ngesikhathi sasendaweni.
Ukwengeza, zonke izindawo zokudlela zizocelwa ukuthi zilinganisele osayizi bamaqembu kubantu abane etafuleni ngalinye, futhi emaqenjini amakhulu, ubufakazi bokugoma buzodingeka.
Uhulumeni wedolobha elikhulu laseTokyo uthe uzoqinisa izindlela zokulwa ne-COVID-19 ekupheleni kukaNovemba ukugqugquzela ukuvuselelwa kwemisebenzi yezenhlalakahle nezomnotho ngenkathi kuvimbela ukubuya kwezifo.